जस्ले कुखुरामा दाङलाई आत्मनिर्भर बनाए – Rajmarg Online
जस्ले कुखुरामा दाङलाई आत्मनिर्भर बनाए
दाङमा वितेको पाँच वर्षमा ब्रोईलर कुखुरापालनमा यति धेरै प्रगती भयो की उत्पादन भएको कुखुरा, मासु र अण्डाको बजार जिल्लाले थेग्न सक्दैन । अर्को तर्फ कुखुरा व्यवसायमा देखिएको असुरक्षा यतिधेरै छ कि कुन समयमा व्यवसायीहरु टाट पल्टिने हुन् भन्ने कुनै निश्चित छैन । यसकारण कुखुरापालनमा सरकारी नीति तथा देशको आवश्यकता अनुसार अपेक्षाकृत विकास हुनसकेको छैन ।
आनन्दकुमार चौधरी । जिल्लामा एक युवा जस्ले सुरक्षित कुखुरा उत्पादन, बजारका लागि ठुलो काम गर्नुभयो । उहाँ दाङमा प्रवेश गर्दा जिल्लामा व्यवसायीक रुपमा सानो सानो उत्पादनमा ब्रोईलर कुखुरा उत्पादन हुने गरेको थियो । उहाँकै भाषामा भन्दा ५ सयदेखि एक हजार कुखुरा पालेर किसानहरु काम गर्दै आएका थिए । तर यो पाँच वर्षको विचमा एउटै कृषकले १० हजार कुखुरा उत्पादन गर्दै आएको तथ्यांक छ । यसको एक महत्वपुर्ण कारण हो विज्ञ प्राविधिक । आनन्दकुमार चौधरी त्यहि क्षेत्रका एक विज्ञ र दक्ष प्राविधिक हुनुहुन्छ । जस्ले कुखुरा हेरेरै लागेको रोग पत्ता लगाउन सक्ने कृषकहरुले उहाँको मुल्यांकन गर्छन् ।
भेटेनरी प्राविधिकको रुपमा जिल्लामा प्रवेश गरेका आनन्दकुमार चौधरी जिल्लाका प्रत्येक घरघरमा पुग्नु भएको छ । कृषकहरुको क्षमताको बारेमा उहाँलाई थाहा छ । उहाँले कृषकसँग भेटेर, क्षमताको बारेमा जानकारी लिएर कृषकको सेवा गर्नुभएको छ । बारा जिल्ला बारागडी गाउँपालिका वडा नं. २ स्थायी घर भएका चौधरीले दाङको कुखुरापालन व्यवसायलाई सुरक्षित बनाउनका लागि ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ । २०५७ सालदेखि २०६७ सालसम्म चितवनको अविनास ह्याचरी उद्योगमा सुपरभाईजरको रुपमा काम गर्नुभएका चौधरीले कान्तीपुर मेटिकल अफ कलेजमा मेटनरी प्राविधिक अध्ययन गर्नुभएको छ । अध्ययन पछि जागिर छोडेर प्राविधिकको काम सुरु गर्नुभएको आनन्दले दुई वर्ष चितवनका गाउँगाउँमा पुगेर कृषकलाई सहयोग गर्नुभयो । घरमा पुगेर कुखुराको बारेमा अध्ययन गरेर उपचार गर्दा कृषकलाई फाईदा हुन थाल्यो ।
त्यो समयमा जिल्लामा ठुलो मात्रामा कुखुरा व्यवसाय गर्दै आएको अन्नपुर्ण पोल्ट्रि फर्म र सुरक्षा पशुपक्षि कृषि सहकारी संस्थासँग आनन्दको समन्वय भयो । जिल्लामा त्यो समयमा दक्ष तथा विज्ञ प्राविधिकको रुपमा कोहि थिएनन् । सरकारी कार्यालयबाट प्रभावकारी सेवा नपाईरहेका कृषकहरुले नीजि क्षेत्रका प्राविधिकहरुबाट उपचार गर्ने परिपाटी छ । अन्नपुर्ण पोल्ट्रि फर्मका पुरुषोत्तम अधिकारी र सुरक्षा पशुपक्षि कृषि सहकारी संस्थाको भरतमणी शर्मासँगको समन्वयबाट दाङमा प्रवेश गरेका आनन्द चौधरी अहिले जिल्लामा दक्ष प्राविधिकको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । दुई चार दिन चौधरी जिल्लामा नहुँदा कृषकहरुलाई अभाव महसुस हुन्छ । ‘म जिल्लामा आएको ६ वर्ष भएको छ । सुरुवातीको २ वर्षमा म दाङका सम्पूर्ण क्षेत्रमा पुगेको छु, कृषकको घरघरमा पुगेर सेवा दिएको छु ।’ आनन्दले भन्नुभयो, ‘यो विचमा मैले धेरै दुःख गर्ने अबसर पनि पाएको छु, र जिल्लाको कुखुरा पालन व्यवसायलाई सुरक्षित बनाउने कार्यक्रममा मेरो केहि हात छ भन्ने लाग्छ ।’ अहिले आनन्द चौधरीले दाङका विभिन्न स्थानहरु सहित रोल्पा, प्युठान र सल्यानका कृषकहरुलाई समेत सेवा दिदै आउनु भएको छ ।
व्यवसायको आधुनिक ज्ञानको कमी हुँदाहुँदै पनि देखासिकीमा अव्यवस्थित ढंगले व्यवसाय सुरु गर्ने कृषकहरु पनि छ । तर विगत जस्तो अहिले छैन । अहिले यो विषयमा अध्ययन गरेर, जानकारी लिएर, तालिम प्राप्त गरेर व्यवसाय सुरु गर्नेहरु पनि छन् । यसले जिल्लामा व्यवसायीक रुपमा कुखुरापालन गर्ने बाताबरण निर्माण गरेको छ । ‘पहिले प्राविधिकहरुको कमी थियो, अहिले त्यस्तो छैन, विशेषज्ञ डाक्टरहरु समेत हुनुहुन्छ, उपचार सेवा प्राप्त हुने भएपछि कृषकहरुले लगानी गर्न सक्छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिले कुखुरा हेरेर अनुमानको भरमा औषधी चलाउनु पर्ने, भ्याक्सिन लगाउनुपर्ने थियो, तर अहिले जाँच गरेर उपचार गर्न सकिन्छ ।’
आनन्दका अनुसार जिल्लाका कृषकहरु ९० प्रतिशत असुरक्षा छ यो व्यवसायमा । तर कृषकहरुले उत्पादनका लागि लगानी गर्दै आएका छन् । खुशीको कुरा यो छ की जिल्लामा भएको उत्पादनले आत्मनिर्भर भएर निर्यात समेत गर्दै आएको छ । काठमाण्डौ, पोखरा, नारायणघाट, बुटवल, नेपालगंज र धनगढीसम्म दाङमा उत्पादन भएको कुखुरा, मासु र अण्डा निर्यात हुँदै आएको उहाँले बताउनु हुन्छ । ‘जिल्लामा के खपत हुन्छ र ? बस्तुहरु त सबै जिल्ला बाहिर जान्छ, दुई दिन सामान बाहिर गएन भने यहाँ त जाम लाग्छ । यो खुशीको कुरा हो ।’ उत्पादन बढेको छ, तर बजारको विस्तार हुन नसकेको भन्दै चौधरीले नयाँ बजारको सिर्जना गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
राप्ती भेट फार्म सञ्चालन गर्दै आउनु भएका चौधरीले जिल्लाका कृषकहरुलाई नजिकबाट मात्र चिन्नु भएको छैन । यो व्यवसायमा उहाँलाई नचिन्ने कृषकहरुले व्यवसायमा सफल हुन सकेका छैनन की भन्ने महसुस गर्न सकिन्छ । उपचारविना सम्भव मान्न नसकिने यो व्यवसायका लागि कृषकहरुले अपनाउनु पर्ने सचेतना अति नै महत्वपुर्ण रहेको चौधरीको भनाई छ । कृषकहरुले जैविक सुरक्षा प्रणालीलाई लागु गरेर व्यवसायमा मेहनत गर्न आवस्यक रहेको उहाँको सुझाव छ । सुरक्षित कुखुरा तथा दाना व्यवसायी समितिको प्राविधिक सल्लाहकार समेत रहनु भएका चौधरीले आफुलाई सफल बनाउन जिल्लाका विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाको ठुलो सहयोग रहेको बताउनुभयो । ‘जिल्लाका कृषकहरु, सप्लायर्सहरु, व्यवसायी समिति लगाएत सबैको सहयोगका कारण मैले कृषकहरुको सेवा गर्न पाएको छु ।’
प्रस्तुती : नवीन अभिलाषी